I-Breo vs. Advair: Umehluko, ukufana, futhi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Ezokuzijabulisa Ukuphila Kahle Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Cindezela Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Izilwane Ezifuywayo Ezempilo Inkampani Izindaba Ukuphuma Imidlalo Inkampani, Imfundo Yezempilo Ezemidlalo Ezisindayo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Breo vs. Advair: Umehluko, ukufana, futhi okungcono kuwe
I-Breo vs. Advair: Umehluko, ukufana, futhi okungcono kuwe
I-Breo ne-Advair yomibili imishanguzo kadokotela ehogelwayo ekhonjisiwe ye-COPD (isifo esingelapheki sokuvimbela amaphaphu) nokwelashwa kwesifuba somoya. Umuthi ngamunye uqukethe i-corticosteroid (ICS) ehogelwayo kanye ne-beta esebenza isikhathi esideezimbili-adonergic agonist (LABA).
Ingxenye ye-ICS, eyi-fluticasone emithini ngayinye, isiza ukunciphisa ukuvuvukala emaphashini. Ingxenye ye-LABA, eyi-vilanterol eBreo ne-salmeterol e-Advair, isiza ukuvula imigwaqo yomoya emaphashini ngokuthambisa imisipha. IBreo itholakala ngegama lomkhiqizo kuphela; yenziwa yi-GSK, noma i-GlaxoSmithKline.
I-Advair itholakala ngohlobo nomkhiqizo ojwayelekile; lo mkhiqizo wenziwa futhi yi-GSK. UMylan wenza umkhiqizo ojwayelekile (umuthi ojwayelekile onegama lomnikazi), obizwa ngeWixela Inhub. UBreo no-Advair yibo i-powder inhalers , okusho ukuthi okuqukethwe yi-capsule kukhokhelwe. I-Advair HFA iyi-inhaler yesilinganiso semitha. UBreo no-Advair banokufana okuningi, kepha futhi kunomehluko othile ophawulekayo.
isigamu se xanax sihlala isikhathi esingakanani
Uyini umehluko omkhulu phakathi kukaBreo no-Advair?
Umehluko omkhulu phakathi kukaBreo no-Advair
Isigaba sezidakamizwa I-ICS (inhaled corticosteroid) ne-LABA (i-beta esebenza isikhathi esideezimbili-adonergic agonist) I-ICS (inhaled corticosteroid) ne-LABA (i-beta esebenza isikhathi esideezimbili-adonergic agonist)
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile Umkhiqizo Umkhiqizo nokujwayelekile
Ngubani igama elijwayelekile? I-Fluticasone furoate / vilanterol I-Fluticasone propionate / salmeterol
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? UBreo Ellipta uhogela inhaler I-Advair Diskus ne-generic,
I-Fluticasone Advair HFA metered-dose inhaler (nge-actuation ngayinye)
Uyini umthamo ojwayelekile? Ukugcinwa kwe-COPD: UBreo Ellipta 100/25: 1 udonsa kanye ngosuku
Isifo Somoya: I-Breo Ellipta 100/25 noma i-200/25: 1 ikhukhume kanye ngosuku
* Hlanza umlomo njalo ngemuva kokusebenzisa, ukunciphisa ubungozi be-thrush yomlomo I-Advair Diskus ne-generic,
Ukugcinwa kwe-asthma: 1 ukudonsa (100/50, 250/50, noma 500/50) njalo emahoreni ayi-12
Ukugcinwa kwe-COPD: 1 ukudonsa (250/50) njalo emahoreni ayi-12
Ukugcinwa kwe-asthma: 2 ukukhukhumeza okuhogelwe njalo ngamahora ayi-12
* Hlanza umlomo njalo ngemuva kokusebenzisa, ukunciphisa ubungozi be-thrush yomlomo
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Abantu abadala abaneminyaka engu-18 nangaphezulu Abantu abadala nezingane ezineminyaka engu-4 nangaphezulu
Izimo eziphathwe nguBreo vs. Advair
Iziguli eziningi zihlushwa yi-COPD noma i-asthma enamandla, enezimpawu ezifana nokuphefumula nokuphefumula okwenzeka ngesikhathi sokuhlaselwa yisifuba somoya. I-Breo (Yini iBreo?) Ukwelashwa okukhulunywa nsuku zonke ezigulini ezine-COPD noma i-asthma. Ingasetshenziswa ezigulini ezineminyaka engu-18 nangaphezulu. I-Advair (Yini i-Advair?) Iyindlela yokwelashwa kabili-nsuku zonke yeziguli ezine-COPD noma i-asthma. Ingasetshenziswa ezigulini ezineminyaka emine nangaphezulu. Le mithi akufanele isetshenziswe ezigulini ezine-acute bronchospasm noma i-asthma engalawulwa yi-ICS kanye nokusetshenziswa kwesinye isikhathi kwe-inhaled i-beta esebenza okwesikhashana ezimbili -abaphikisi (njenge-albuterol, eyaziwa nangamafomu egama lomkhiqizo njengeProAir HFA, Proventil HFA, neVentolin HFA).
Isimo UBreo I-Advair
Isikhathi eside, kanye-nsuku zonke, ukwelashwa kokugcinwa kokuvinjelwa komoya nokunciphisa ukukhuphuka kweziguli ezine-COPD Yebo Akunjalo
Ukwelashwa kanye kanye kwansuku zonke kwesifuba somoya ezigulini ezineminyaka engu-18 nangaphezulu Yebo Akunjalo
Ukwelashwa kabili kwesifo se-asthma ezigulini ezineminyaka emine nangaphezulu ubudala Akunjalo Yebo
Ukwelashwa kabili-nsuku zonke kokulondolozwa komoya nokunciphisa ukukhushulwa kweziguli ezine-COPD Akunjalo Yebo
Ingabe iBreo noma i-Advair isebenza kangcono?
Ezinyangeni eziyisithupha ezingahleliwe, ezilawulwa yi-placebo funda ngokuqhathanisa uBreo no-Advair ezigulini ezingama-806 ze-asthma, womabili amaqembu okwelashwa athola ukuthuthuka okulinganayo ku-FEV1 (ivolumu yokuphoqelelwa yokuphoqelelwa; isilinganiso sokuthi kungakhipha umoya ongakanani ngomzuzwana owodwa ngemuva kokuhogela okujulile), izinga lezikolo zokuphila, nezikolo zokulawula i-asthma. Kwakungekho mehluko emazingeni okukhula, futhi zombili izidakamizwa zabekezelelwa kahle.
Abathathu izifundo kuqhathaniswa uBreo no-Advair ezigulini ezingama-40 nangaphezulu ezine-COPD ezilinganiselwe nezimbi. Ekupheleni kwesifundo seviki eli-12, abacwaningi baphetha ngokuthi zombili lezi zidakamizwa ziholele ekuthuthukisweni komtholampilo okufanayo futhi zombili lezi zidakamizwa zinamaphrofayili afanayo okuphepha.
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zeBreo vs. Advair
IBreo ne-Advair zivame ukumbozwa umshwalense kanye ne-Medicare Part D. Ama-Copays ahlukahluka kakhulu. Yize ama-generic engabizi kakhulu ngokujwayelekile, ezinye izinkampani zomshuwalense zithanda i-brand Advair ngenxa yezivumelwano zenkontileka. Intengo emaphakathi kaBreo ngaphandle komshuwalense ingama- $ 450 kepha ungayithola cishe ngama- $ 279 ngesigqebhezana se-SingleCare. Intengo emaphakathi ye-Advair Diskus ingu- $ 474 yomkhiqizo futhi iphansi njengama- $ 105 ngokujwayelekile.
Umthamo ojwayelekile Isibonelo: 200 mcg / 25 mcg inhaler: 1 puff nsuku zonke Isibonelo: I-Advair Diskus 250 mcg / 50 mcg: 1 ikhukhume kabili ngosuku
Inkokhelo ejwayelekile yeMedicare Part D $ 19- $ 400, kuyehluka $ 40- $ 400, kuyehluka
Izindleko ze-SingleCare $ 279 $ 105
Imiphumela emibi ejwayelekile yeBreo vs. Advair
NgeBreo, imiphumela emibi kakhulu ejwayelekile yi-nasopharyngitis (ukutheleleka okuncane komphimbo), ukutheleleka okuphezulu okuphefumulayo, i-oral thrush (ukhunta emlonyeni), nekhanda. Imiphumela emibi ye-Advair iyafana, ngesifo esiphakeme kakhulu se-pharyngitis, kanye nezinkinga zamathumbu ezinjenge-nausea, ukuhlanza, isifo sohudo, nekhanda.
Ukusiza ukunciphisa ingozi ye-thrush yomlomo, iziguli kufanele zihlanze futhi zikhafule ngamanzi ngemuva komthamo ngamunye weBreo noma we-Advair.
Ngokuphepha, kunengozi eyengeziwe yokufa okuhlobene nesifuba somoya okusetshenziswa i-LABA kuphela. Kodwa-ke, i-FDA kumenyezelwe ngo-2017 ukuthi inhlanganisela ye-ICS / LABA enjengeBreo noma i-Advair ayibangeli ingozi yokwanda yokufa.
Eminye imiphumela emibi ingavela. Xhumana nochwepheshe wezokunakekelwa kwezempilo ukuthola uhlu oluphelele lwemiphumela engemihle.
I-Nasopharyngitis Yebo 9% Yebo 5%
Ukutheleleka okuphezulu okuphefumulayo Yebo 7% Yebo 21-27%
I-thrush yomlomo Yebo 5% Yebo 1-4%
Ubuhlungu bekhanda Yebo 7% Yebo 12%
Pharyngitis Yebo amaphesenti amabili Yebo 10-13%
Isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo Akunjalo - Yebo 4%
Umthombo: I-DailyMed (Breo) , I-DailyMed (Advair)
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kukaBreo vs. Advair
Ngoba uBreo no-Advair bobabili baqukethe i-fluticasone, kanye ne-LABA, banohlu olufanayo lokusebenzisana kwezidakamizwa. Imithi ethile ebizwa nge-CYP3A4 inhibitors, ihlangana no-Breo no-Advair ngokwandisa amazinga emithi. Ama-anti-depressant athile asesigabeni se-MAO inhibitor njenge-selegiline, i-Eldepryl, i-rasagiline, noma i-Azilect, nasesigabeni se-tricyclic antidepressant— i-amitriptyline, i-Elavil, i-nortriptyline noma i-Pamelor, nayo iyasebenzisana noBreo no-Advair. Ama-beta blockers, afana ne-metoprolol noma i-atenolol, i-loop diuretics efana ne-furosemide, ne-thiazide diuretics efana ne-hydrochlorothiazide, nayo ixhumana no-Breo noma i-Advair.
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa UBreo I-Advair
nabanye I-CPY3A4 inhibitors Yebo Yebo
I-Rasagiline I-MAOI (monoamine oxidase inhibitor) Yebo Yebo
nabanye Abavimbela i-Beta Yebo Yebo
I-Hydrochlorothiazide I-Loop noma i-thiazide diuretics Yebo Yebo
Izexwayiso zeBreo vs. Advair
Zombili lezi zidakamizwa ziza nohlu olude lwezexwayiso.
I-Breo noma i-Advair akufanele iqalwe kusiqephu esisongela impilo se-COPD noma i-asthma.
Ukugwema ukweqisa ngokweqile, iBreo noma i-Advair kufanele isetshenziswe njengokuyalelwa ngudokotela wakho, kumthamo obekiwe, futhi akufanele ithathwe nenye i-LABA.
Hlanza uphinde ukhafule ngamanzi ngemuva komthamo ngamunye weBreo noma we-Advair ukugwema i-oral thrush (imvubelo).
Ukuqapha ingozi eyengeziwe ye-pneumonia.
Iziguli ezinamasosha omzimba acindezelwe ngenxa yezimo ezithile zezokwelapha noma imishanguzo zisengozini enkulu yokutheleleka lapho zithatha iBreo noma i-Advair.
Sebenzisa ukuqaphela lapho udlulisa isiguli kusuka ku-oral steroids (njenge-prednisone) kuya eBreo noma e-Advair.
Iziguli kufanele zihlolwe ngokucophelela izimpawu zokumunca i-systemic steroid, njenge-hypercorticism kanye ne-adrenal suppression lapho ithatha iBreo noma i-Advair.
I-Breo noma i-Advair ingahle iholele kwi-bronchospasm ephikisayo esongela impilo (i-airway hyperresponsiveness). Uma lokhu kwenzeka, isiguli kufanele siphathwe nge-bronchodilator esebenza okwesikhashana.
I-LABA ingadala ukwanda kwesilinganiso sokushaya kwenhliziyo noma umfutho wegazi, kanye nama-arrhythmias enhliziyo. Sebenzisa ngokuqapha ezigulini ezinezinkinga zenhliziyo.
Ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwe-ICS kungaholela engcupheni yokuqhekeka, kanye ne-glaucoma kanye ne-cataract.
Ukuqapha ushukela wegazi owandisiwe nokwehla kwe-potassium.
Gada ukukhula kwezingane nentsha.
Ukuqapha ukusabela ngokushesha kwe-hypersensitivity (ukulunywa, i-angioedema, ukuqubuka, ukukhwehlela, umfutho wegazi ophansi), kufaka phakathi i-anaphylaxis. Iziguli ezinenkinga yokungezwani komzimba nobisi olunamaprotheni akufanele zisebenzise iBreo noma i-Advair.
I-Advair kufanele isetshenziswe ngokuqapha ezigulini ezinokuphazamiseka okuthile kokuxubana noma i-thyrotoxicosis.
Azikho izifundo ezanele, ezilawulwa kahle zeBreo ne-Advair kwabesifazane abakhulelwe. Isidakamizwa kufanele sisetshenziswe kuphela ekukhulelweni uma inzuzo kumama idlula ubungozi enganeni, futhi kuphela ngemvume kadokotela wakho. Uma usuvele uthatha uBreo noma u-Advair futhi uthola ukuthi ukhulelwe, thintana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Imibuzo ebuzwa njalo ngeBreo vs. Advair
IBreo iqukethe i-ICS ne-LABA futhi isetshenziselwa ukwelapha iziguli ezine-COPD noma i-asthma. Isetshenziswa kanye ngosuku futhi ingasetshenziswa ezigulini ezineminyaka engu-18 nangaphezulu.
I-Advair iqukethe i-ICS ne-LABA futhi isetshenziselwa ukwelapha iziguli ezine-COPD noma i-asthma. Isetshenziswa kabili ngosuku futhi ingasetshenziswa ezigulini ezineminyaka engu-4 nangaphezulu.
Ingabe iBreo vs. Advair iyafana?
Yomibili le mithi iqukethe i-ICS efanayo (i-fluticasone) kanye ne-LABA. I-LABA eBreo ibizwa nge-vilanterol kanti i-LABA e-Advair ibizwa nge-salmeterol. Zombili lezi zidakamizwa ziyafana kodwa zinokwehluka okuthile. Isibonelo, i-Advair isetshenziswa kabili nsuku zonke, kuyilapho uBreo esetshenziswa kanye ngosuku.
Ingabe iBreo vs. Advair ingcono?
Lokho kuya ngokuthi. Iziguli eziningi zibona ukuthuthuka kwezimpawu ngemithi ethile. Udokotela wakho angakusiza unqume ukuthi iBreo noma i-Advair iyisidakamizwa esifanele yini kuwe.
Ngingayisebenzisa yini iBreo vs. Advair ngenkathi ngikhulelwe?
Ngoba uBreo no-Advair abakaze bahlolwe kwabesifazane abakhulelwe, sebenzisa kuphela umuthi ngokugunyazwa udokotela wakho uma ethatha isinqumo sokuthi inzuzo idlula ubungozi. Uma usuvele usebenzisa uBreo noma u-Advair futhi uthola ukuthi ukhulelwe, thintana nodokotela wakho ukuthola iseluleko sezokwelapha.
Ngingayisebenzisa yini iBreo vs. Advair ngotshwala?
Imininingwane yomkhiqizi ye- UBreo futhi I-Advair ayikhulumi ngotshwala. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola isiqondiso.
Isebenza kanjani imishanguzo yokuvikela isifuba somoya?
I-ICS eBreo nase-Advair isiza ukunciphisa ukuvuvukala emaphashini akho, kuyilapho i-LABA ithambisa imisipha futhi ivule izindlela zomoya. Ngokwenza kanjalo, izimpawu zakho ze-asthma noma ze-COPD kufanele zithuthuke.
Ingabe iBreo ibiza kakhulu kune-Advair?
Kuya ngohlelo lwakho lomshuwalense. Intengo kaBreo uma iqhathaniswa ne-Advair iyafana. Ungagcina imali ngokusebenzisa amakhuphoni womkhiqizi noma ukuhlola i-SingleCare.com ukuthola amakhuphoni.
Ingabe iBreo neSymbicort yinto efanayo?
IBreo neSymbicort ziyefana. IBreo iqukethe i-ICS fluticasone kanye ne-LABA vilanterol. I-Symbicort iqukethe ne-ICS, ebizwa nge-budesonide, kanye ne-LABA, ebizwa nge-formoterol.
Yini uBreo ayenzela amaphaphu akho?
I-ICS eBreo isiza ukunciphisa ukuvuvukala emaphashini, kuyilapho i-LABA isiza ukukhulula imisipha futhi ivule nezindlela zomoya. Lokhu kuzosiza ukuthuthukisa izimpawu zesifuba somoya noma i-COPD.
Yini i-inhaler efana ne-Advair?
I-Dulera (mometasone / formoterol), iSymbicort (budesonide / formoterol), neBreo (fluticasone / vilanterol) konke kuyafana ne-Advair. Yonke le mithi iqukethe i-ICS ne-LABA.
UKUDLA KWE-JUICE: Ama-4 Detox Juice Ungadliwa Ukuze Uqale Usuku Lakho
Yini iHumira futhi isetshenziselwani?
iyiphi i-magnesium elungele kakhulu amajaqamba emisipha
umkhuhlane uyathathelana isikhathi esingakanani ngemuva kwezimpawu
ukudla okungcono kakhulu ongakudla nomkhuhlane
zithini izindleko ze-tamiflu ngaphandle komshwalense
yini ozogeza kuyo ngemvubelo yokutheleleka
izindlebe zehla ngenxa yezindlebe ngenxa yamakhaza
ungathatha uhlelo sekwephuze kangakanani b